Snapchat ipuratifomu huru yekutumira discrete, mavhidhiyo akaiswa nguva uye mapikicha kushamwari uye mhuri. Unogona kugovana zviono zvakajeka uye mameseji akakosha, akachengeteka mukuziva kuti zvemukati zvaunogovana hazvigone kuponeswa kunze kwekunge uchitendera
Nehurombo, izvo hazvisi zvinogara zviri chinhu chakanaka, kunyanya kana iwe uchitsvaga kuchengetedza iyo Snapchat vhidhiyo iwe pachako. Kana iwe uchida kuziva machengeterwo eSpapchat mavhidhiyo, iwe unofanirwa kuziva kune zvimwe zvinogumira. Iri gwaro rine zvese zvaunoda kuti uzive nezve kuchengetedza Snapchat mavhidhiyo.
Unogona Kuchengeta Snapchat Mavhidhiyo?
Izvo zvinokwanisika kuchengetedza Snapchat mavhidhiyo, zvinoenderana nekwaanobva. Kana iwe wakagadzira mavhidhiyo iwe pachako, unogona kuendesa kune ako kamera roll kuitira kuti ugone kuachengeta nekusingaperi uye kuashandisa kunze kwepuratifomu. Izvi zvinoshanda zvese zviri zviviri Android uye iPhone zvishandiso.
Iwe unogona zvakare kutumira mavhidhiyo aunogamuchira kubva kune vamwe vashandisi, asi chete kana ivo vakatumira mavhidhiyo seanobatanidzwa mune Snapchat mameseji chat. Iwe haugone kusevha ipfupi, yakatemwa, uye izere-skrini Snapchat mavhidhiyo mune iyo app yacho. Iwe zvakare haugone kuchengetedza mavhidhiyo anoonekwa sechikamu chemushandisi Snapchat nyaya.
Unogona chete kusevha mavhidhiyo aya nekutora skrini kana kurekodha skrini uchishandisa nhare mbozha yekurekodha app. Nekudaro, kuyedza kutora screenshots kana zvakarekodhwa seizvi kunozivisa mumwe mushandisi.
Snapchat ipuratifomu yemavhidhiyo anoraswa, saka uchafanirwa kungwarira kana iwe ukaedza kusevha Snapchat mavhidhiyo pausingafanire. Kwete izvi chete zvinogona kusiyanisa hukama hwako nevatumira vhidhiyo, asi zvinogona zvakare kutariswa sekushungurudzwa uye kukuisa mukutyora mutemo webasa raSnapchat.
Kuchengetedza Yako Yega Snapchat Mavhidhiyo
Kana iwe wakanyora vhidhiyo (kana kutora pikicha) mune iyo Snapchat app, iwe unogona nyore nyore kuichengeta isati yatumirwa kune ese ari maviri Android uye iPhone zvishandiso.
Kuti uite izvi, vhura iyo Snapchat app uye nyora vhidhiyo nekudzvanya uye kubata iyo rekodhi bhatani pakati peiyo kamera yekuona kamera.
Kuti uchengetedze Snapchat vhidhiyo yawanyora, tinya iyo Download bhatani mukona yepasi-kuruboshwe.
Iyo vhidhiyo yakanyorwa zvino ichave ichiwanikwa mune yako kamera kamera roll kuti iwe ushandise kumwe kunhu.
Maitiro Ekuchengetedza Eko Pako Snapchat Nhau Vhidhiyo
Nhau dzeSnapchat dzinopa muongororwo wemaawa makumi maviri nemana ekupedzisira emushandisi iyeye, inoratidza rondedzero yezviitiko, mameseji, nezvimwe. Unogona kutumira aya mavhidhiyo, asi iwe unogona chete kuita izvi mavhidhiyo asati apera, kunze kwekunge mavhidhiyo akagadzirirwa kuti achengetwe otomatiki kuchikamu chako cheSpapchat Memories.
Kuti uchengetedze Snapchat Nhau vhidhiyo, vhura iyo Snapchat app uye tora iyo Bitmojior nyaya icon mukona yepamusoro-kuruboshwe.
Mu Stories chikamu cheako Snapchat mushandisi mbiri, iwe unogona kusarudza kusevha imwe Snapchat Nhau vhidhiyo kana yezuva rese rakakodzera maSnapchat Nhau mavhidhiyo kamwechete. Kuchengeta Nhau mavhidhiyo kubva pazuva rese, tinya iyo matatu akatetepa menyu icon pedyo ne My Story chikamu.
Mumenyu yepasi, tapira Sevha Nyaya kuchengetedza mavhidhiyo kukamera yako roll.
Kana iwe uchida kuchengetedza yega Snapchat Nhau vhidhiyo pane kudaro, tinya iyo yega vhidhiyo yakanyorwa pasi pe My Story chikamu munzvimbo yako yemushandisi kuti uione.
Tora iyo hampurilainen menyu icon mukona yepamusoro-kurudyi kuti uwane marongero evhidhiyo iyoyo.
Kuchengeta iyo vhidhiyo yeNhau, tinya iyo Save bhatani riri pasi.
Sezvo nemavhidhiyo aunotora wega, chero mavhidhiyo aunochengetedza kubva kune yako Snapchat Nhau anozotumirwa kune yako kifaa kamera kamera.
Sevha Yakabatanidzwa Snapchat Mavhidhiyo Kubva Kune Vamwe Vashandisi
Kana iwe ukatambira vhidhiyo sechibatanidzwa mune iyo Snapchat mameseji chat, ipapo unogona kuichengeta nekuitumira kunze (uchifunga kuti une mvumo yeku). Kuita izvi kunozivisa iye anotumira, saka iwe unofanirwa chete kuita izvi kana iwe wagamuchira mvumo yekuzviita.
Kuti uchengetedze yakanamatira Snapchat vhidhiyo, vhura iyo Snapchat chat, wobva wadzvanya ubatise yakanamatira vhidhiyo. Mune iyo pop-up menyu, tinya iyo Ponesa kuKamera Roll sarudzo yekutumira vhidhiyo.
Izvi zvinochengetedza vhidhiyo kukamera yako roll kuti iwe ushandise kumwe kunhu.
Sevha Yakazara Screen Snapchat Mavhidhiyo uye Nhau
Kusiyana nemavhidhiyo eSnapchat, iwe haugone kuchengetedza yakazara skrini skrini Snapchat mavhidhiyo anotumirwa kubva kune vamwe vashandisi. Aya ndiwo "chaiwo" meseji yeSnapchat iyo ndeyechinguva sezvayakatarisirwa. Saizvozvo, Snapchat Nhau kubva kune vamwe vashandisi hazvigone kuponeswa nevamwe vashandisi mukati meiyo Snapchat app pachayo.
Nzira chete yekutenderedza dambudziko iri kushandisa nharembozha vhidhiyo (kana kutora skrini kana iwe uchida kuchengetedza pikicha panzvimbo). Kana iwe ukaita izvi, mumwe mushandisi anobva aziviswa ipapo, uye hapana imwe nzira yekutenderedza izvi pasina kutyora mutemo webasa waSpapchat.
iPhones dzakavakira-mukati rekodhi rekodhi tekinoroji, nepo varidzi vezvigadzirwa zveApple vane Android 9 kana zvishoma vachada kuisa yechitatu-bato app senge AZ Screen sahwira. Android 10 varidzi vezvigadzirwa vanogona kushandisa yakavakirwa-mukati skrini yekurekodha ficha panzvimbo.
Android 10 vashandisi unogona kutanga kurekodha skrini nekutsvaira pasi yavo yekuzivisa menyu uye nekukanda iyo Screen Recorder icon. Nemodi iyi inoshanda, unogona kutamba vhidhiyo yakagamuchirwa yeSnapchat kana Snapchat Nhau kuti utore zvemukati zvaunoda kuchengetedza usati wabaya iyo Screen Recorder icon zvakare kumisa kurekodha.
Vashandisi ve iPhone inoda kuvhura iyo Settings app pafoni yavo kuti vatange kurekodha skrini. Kubva ipapo, pombi Control Center> Gadzirisa Kudzora uye tora iyo + (pamwe) icon pedyo ne Screen Recording sarudzo yekuwedzera kune iyo Yekutonga Center menyu.
Nechidzitiro kurekodha chakagoneswa, vhura iyo Control Center nekusvetuka kubva kumusoro-kurudyi kona (kana pasi, zvinoenderana neyako iPhone modhi). Mu Control Center, tapira iyo chena denderedzwa icon, wobva wadzvanya Kutanga Kurekodha kuti utange kurekodha.
Rekodha iyo yakagamuchirwa Snapchat vhidhiyo kana Snapchat Nhau, wobva wavhura zvakare iyo Control Center. Kubva ipapo, tinya iyo dzvuku dzera icon zvakare kumisa kurekodha.
Sezvambotaurwa, Android 9 (uye vakuru) vashandisi inoda kuisa app senge AZ Screen sahwira kuti utore mamwe evashandisi Snapchat mavhidhiyo uye Nhau. Mu AZ sahwira app hwindo, tinya iyo rekodhi icon muzasi-kuruboshwe kutanga kurekodha.
Neyo app yekurekodha, vhura iyo Snapchat Nhau kana vhidhiyo kuti uitambe uye uirekodhe. Dzokera kuapp, wobva wadzvanya iyo rekodhi icon zvakare kuti ipedze kurekodha uye chengetedza iyo yako kamera roll.
Kugadzira Yakanyanya Snapchat
Iye zvino zvaunoziva kusevha Snapchat mavhidhiyo, unogona kutanga kusevha zviyeuchidzo zvinonyanya kukosha. Iwe unogona kutora iri nhanho kumberi uchishandisa Snapchat's chairo Yekuyeuka chikamu kuti uone runyorwa rweakambochengetedzwa Snaps. Ita izvi nekusvetuka uchikwira kubva pasi muSpapchat's camera view mode.
Iyo chikuva haisi yemunhu wese, saka kana uchinetseka nezve kuchengetedzeka kwako, saka ita shuwa kuti waita iyo akanakisa Snapchat zvakavanzika matipi, kusanganisira kuviga yako ruzivo kubva kune vasingazivikanwe vashandisi. Iwe unogona zvakare chinja rako rekushandisa reSnapchat kana, kana uchida, bvisa yako Snapchat account uye pukuta yako data zvachose.
Maitiro Ekuchengetedza Vhidhiyo paSnapchat